Ndezvipi zvipo zvemari yakavhenganiswa? | Ehupfumi Zvemari
Nhoroondo ye investments Icho chimwe chezvinhu zvakawandisa zvigadzirwa izvo zvinoenderana mune yekudyara chikamu. Imwe yacho ndeye inonzi mari yakavhenganiswa, iyo inogona kuve yakajeka nzira kune inoitika mamiriro mune misika yemari. Imwe yemipiro mikuru yeichi chigadzirwa chemari ndechekuti inosanganisa mari yakatarwa nemari inoshanduka pasina kuchinja modhi yekudyara. Chero nzira, ndeimwe yemikana iwe yauinayo panguva ino yekuita purofiti ine pundutso nekubudirira kukuru kana kushoma.
Kugadzikana kwayo uye zvakare iyo kuchinjika Inoita mari yakavhenganiswa chimwe chezvikamu zvinokurudzirwa mumusika wanhasi. Iri kirasi remari yekudyara harisi nani kana kunyanyisa kupfuura mamwe mafomati, asi pane zvinopesana anogona kuve akawanda yakakodzera mune kumwe kufamba yemisika yemari. Kupfuura zvimwe zvakateedzana zvekufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Nekudaro, mukati memari yakavhenganiswa pane zvakawanda zvikamu zvavo: inoshanduka, ine euro yakavharwa, yepasirese nezvimwe.
Iyo ndeimwe yemhando dzakasarudzika nevanoongorora zvemari panguva ino chaiyo kuchengetedza nzvimbo yekudzivirira kumisika. Hazvishamisi kuti vanowanzo tenderera deredza uremu hwayo muzvikwereti uye kune rimwe divi, iyo nguva mune yakamisirwa mari chikamu inoderedzwa nekuda kwenjodzi dzekukwira kwemitengo. Asi chero zvakadaro, kwete mune zvese zviitiko kubatira kwayo kunobatsira zvikuru kune vashoma nepakati varimi. Iwe unofanirwa kuziva maitiro ekupinda munzvimbo dzako uye kunyanya iyo chaiyo nguva yekusiya uye kupinda mamwe mafomati ekudyara.
1 Kuumbwa kwemari yakavhenganiswa
2 Kurasikirwa kunodzorwa zvakanyanya
3 Nekusiyana kwekudyara
4 Mhando dzakasiyana siyana zvichienderana nemutengi
5 Kune mamwe maitiro ekuzvidzivirira
Kuumbwa kwemari yakavhenganiswa
Izvo zvinonzi mari yakavhenganiswa zvine chimiro chakasiyana kwazvo sezvo ivo vachitanga kubva kune akasiyana emari midziyo. Iwo anowanzo kuve anoumbwa nenhumbi kubva, zvese zvakagadziriswa uye zvinoshanduka mari. Asi pasina kusiya zvimwe zvinopihwa, semuenzaniso zvinoitika nemari yemari kana kunyangwe mune akanyanya mhando mamodheru ane kudyara kunodaidzwa senge imwe nzira. Saka kuti pakupedzisira chiyero chakanyanya kukura kupfuura mune mamwe mamodheru anopiwa nemari yekudyara.
Chii chaunowana kubva pakushandisa iyi yakasarudzika nzira yekudyara? Zvakanaka pamusoro pezvose zvaunazvo zvakawanda zvakasiyana kupfuura pakutanga. Ichi chinhu chinogadzira kuti iwe uve nekuchengetedzwa kukuru muzviitiko zvisingadiwe nemisika yemari. Kunyanya kana kusagadzikana mumusika wemasheya ndiyo yavo dhinomineta uye izvo zvinoita kuti nzvimbo dzemusika dzive dzakaomesesa kune ese mapurofesa emari. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikonzero nei ivo vari akakodzera kwazvo kwenguva iyo mafambiro asina kutsanangurwa.
Kurasikirwa kunodzorwa zvakanyanya
Humwe hunhu hwemari yakavhenganiswa ndeyekuti, pamusoro pezvose, kurasikirwa kunowanzo kudzorwa uye kazhinji akanaka portfolio mixers. Hazvishamise kuti ivo havapi yakanakisa kudzoka kwemari yekudyara zvinoenderana neyakaenzana, asi zvirinani ivo vanotendera kuenzanisa kurasikirwa kana mamiriro emusika asiri anodikanwa. Kune rimwe divi, iri kirasi yezvigadzirwa zvemari inogona kutarisirwa nemaneja nechinangwa chekudzora zvakanyanya njodzi. Pamusoro pemamwe marongero aunogona kushandisa panguva ino.
Ehezve, haisi itsva yekudyara modhi, asi zvinopesana, yanga ichishanda kwemakore mazhinji. Chero zvazvingaitika, iri mumakore achangopfuura umo ivo vakatora rakakura basa. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti iri nyore nzira yekuunganidza mari yakatarwa nemari inoshanduka. Pasina kuita chero kufamba mumisika nekuti iri mari yekudyara iyo vamiririri vezvemari vanokugadzirira. Unogona kupi iwe sarudza kubva kumamodeli mazhinji uye nemhando dzese dzekunyorwa. Zvizhinji kupfuura zvaunogona kutenda kubva pakutanga. Pakupera kwezuva isu tiri kutaura nezve mari yekudyara nezvazvinoreva.
Ichi ndicho chimwe cheanonyanya kuzivikanwa madhinominesheni. Kusvika pakuti mari yakavhenganiswa yakanaka mukwanisi wezvikwama zvedu. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti vanobvumidza chikamu chemari kuti chigoverwe kune chakakura kana chidiki kutarisana nemari, mari, nezvimwe. Kana kutotora matanho ekumisikidza kana kuisa mari muzvinhu zvatingatadza kushandisa kazhinji nguva zhinji. Nekuti kana izvi zvigadzirwa zvemari zvakatanhamara nechimwe chinhu, imhaka yekusiyana kwepamusoro uko kwavo mamodheru ekutarisira. Icho chinhu chinhu chaunofanirwa kuziva kana iwe uchizohaya imwe yeaya mafomati kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, mari yakavhenganiswa inobatsira zvakanyanya munguva dzakareba dzekugara, uko mhedzisiro yerudzi urwu yemapotifoti inowanzo kuratidza kuomarara kwakasimba. Kunyange inowedzera kukosha kuzvinzvimbo yenzvimbo dzekudyara. Kusiyana nedzimwe mhando dzemari dzekudyara idzo dzakaganhurirwa, kunyangwe hazvo zvinangwa zvavo zvichinyanya kutsanangurwa. Mune ino kesi, kune akawanda akasiyana anokamuranisa purofiti yavo, nekudaro vanofamba pasi pemwero wakadzikama wemubhadharo kupfuura mune mari yemari. Kunyangwe iri pamusoro pane iyo inogadzirwa kubva pamari yakatarwa.
Mhando dzakasiyana siyana zvichienderana nemutengi
Mukati mavo, sarudzo dzakasiyana dzinoonekwa zvinoenderana nehupfumi hwemunhu uye zvaunoda. Kunyangwe muzviitiko zvakawanda iri yakanakisa imwe nzira yenguva senge dzazvino idzi. Iko musika wemasheya usina yakanyatsotsanangurwa mafambiro uye nguva dzekusagadzikana kuri kusimukira izvo zvine njodzi pakutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Uye iri panguva ino apo yakavhenganiswa mutual mari inogona kushanda zvakanyanya. Uye zvakare, iwe unogona kusarudza akasiyana mamodheru zvinoenderana neyako yekudyara chiratidzo: zvine mwero, zvine hukasha, zviri pakati nepakati kana chero imwe.
Kune rimwe divi, uye sekune imwe mari yekudyara, mune izvi unogona kusarudza pakati peanoshanda kana pasiti manejimendi. Ndokunge, kune chii unogona kuzvimutsiridza zvishoma nezvishoma zvinoenderana nemamiriro matsva emusika. Nekudaro, sarudzo iyi inoenderana zvakanyanya nenjodzi yaunogona kutora kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti, semuenzaniso, iwo eanoshanda manejimendi anoreva kuti yako yekudyara portfolio inozochinja zvishoma nezvishoma kune iyo misika yemari inoenda. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kunyange kubatsirwa kubva kune akasarudzika mamiriro ezvekutengesa misika.
Kune mamwe maitiro ekuzvidzivirira
Pane chinhu chimwe chinofanirwa kuve chakajeka kwauri kubva zvino zvichienda uye icho ndechekuti iri kirasi remari yekudyara rakanyanya kukodzera gamuchirai mamwe dzimwe nzvimbo dzekudzivirira Izvo kusvika ikozvino. Izvi mukuita zvinoenderana nekuti iwe hauzove nekuita kune simba kune yako hupfumi mipiro. Nepo pane izvo zvinopesana, iwe uchapfuura isina kusimba inodzoka iyo zvigadzirwa zvebhangi zvinokupa iwe panguva ino (nguva yekuisa, manotsi ebhengi ekuvimbisa uye kunyangwe maakaundi ane mari yepamusoro). Muzviitiko zvese izvi zvinofamba munzira yakatetepa ichibva pa0,25% kusvika 1,50%. Izvo zvingave zvinonyanya kubatsira iwe kuti utsvage homwe yeaya maitiro kuzadzisa zvinangwa zvako zvepedyo.
Kubva pane ino mamiriro ese, chimwe chinhu chaunofanirwa kufunga mumari yakavhenganiswa inyaya yekuti vanogona kuve nemakomisheni akawandisa kupfuura mune zvimwe zvigadzirwa zvemari. Semuenzaniso, mukutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya, mari dzekuchinjana-dzakatengeswa kana zvigadzirwa zvakasiyana zvinobva. Zvipikiri pamusoro mubhadharo unogona kusvika kusvika ku2% pamari yakadyarwa. Kunyangwe izvi zvinodhura zvichigona kudzivirirwa pamwe nekugadzwa kwemasanganiswa emari ekudyara ayo anobva munyika mavambo. Hazvishamise kuti ivo vane anodhura epakati ekumisikidza kumamisha ese.
Chimwe chinhu chekukoshesa nerudzi urwu rwezvigadzirwa zvemari ndezvekuti havambokuvimbisa iwe kudzoka kwakatemwa senge imwe mari yekudyara. Kana zvisiri, pane kudaro, zvese zvinoenderana nemamiriro emisika yemari. Kusvika padanho rekuti unogona kunyange kusiya maeuro mazhinji munzira, sezvakaitika makore ano neimwe mari yeaya maitiro. Nekuti kunyangwe purofiti yacho yanga yakakwira mumakore achangopfuura, izvi hazvireve kuti zvinofanirwa kudzokororwa mumakore anotevera. Kwete zvakati wandei sezvo iri njodzi iri pachena yaunofanirwa kufunga kana uchihaya zvigadzirwa zvekudyara.
Uye kupedzisa, taura kuti nguva dzose kuraira kwakanaka kunogona kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvakagadzwa kubva pakutanga. Hazvizokubhadhare chinhu uye pachave nemipiro mizhinji iyo ino sevhisi ichagadzira kubva zvino zvichienda mberi. Kubva kubhangi rako raunowana iwe uchave nebasa iri iro risingazove nekushomeka kwezvikumbiro kuitira kuti iwe ugone kuisa mari yako mumazuva anotevera. Uye nenzira iyi, unogona kusanganisa yakatarwa mari nemari inoshanduka. Ndokunge, shure kwezvose, izvo ndezvei nezve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ndezvipi zvipo zvemari yakavhenganiswa?